Fizahan-tany amin'ny fotoanan'ny korontana | Vaovao momba ny fizahantany
Other • Olona manao vaovao • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Fizahantany ao anatin'ny fotoanan'ny korontana
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahantany » Fizahantany ao anatin'ny fotoanan'ny korontana
Ny korontana dia teny ampiasaina hilazana an'izao tontolo izao rehefa tsy misy dikany; rehefa tsy mitovy ny 2 + 2 dia mamela antsika tanteraka sy misavoritaka tanteraka. Indraindray ny "effet butterfly" dia ampiasaina hanazavana ilay trangan-javatra: ny hevitra dia ny fikapohan'ny elatry ny lolo any Arzantina dia mety hiteraka tadio any Texas telo herinandro taty aoriana. Angamba, amin'izao fotoana izao, tsara kokoa ny mijery an'i Aristotle sy ny teôria momba ny "fiankinan-doha mora tohina" izay nahitany fa, "ny fihatahana voalohany indrindra amin'ny fahamarinana dia nampitomboina arivo heny taty aoriana" (Aristotle OTHER, 4b271).
Mampalahelo fa miaina ao anatin'ny tontolo iray izay namboarina ny lainga sy ny antsasaky ny fahamarinana isika; izay nekentsika ho marina sy tena izy omaly dia tsy mitondra valiny mitovy intsony; izay nataontsika mba hamoronana fifandanjana amin'ny fiainantsika matihanina sy manokana dia tsy mitondra valiny mahafa-po na mahafa-po intsony.
Fiomanana mialoha ny loza
Ny indostrian'ny hotely, fizahan-tany ary fizahan-tany dia voatsikera noho izy ireo tsy vonona amin'ny krizy ity ary ny loza ara-toekarena. Hita fa tsy vonona ho vonona amin'ny valin-kafatra izay mety hanalefaka ny vokan'ny hetsika COVID-19 ny mpitondra sy ny mpitondra governemanta ary ny mpanao politika ary koa ny fivoarany.
Ny sasany milaza fa ny fanombanana ny loza mety hitranga dia tokony ho ampahany amin'ny fizotran'ny fitantanana ary mifototra amin'ny famakafakana ny tranga, ny drafitra contingency novolavolaina mifanaraka amin'ny toe-javatra heverina fa mety hitranga. Teoria tena tsara izy io; na izany aza, ankoatry ny fisehoan-javatra sasany, izany hoe ny rivodoza any Karaiba, ny krizy fizahan-tany dia tsy ampoizina amin'ny fisehoany, ny fivoarany ary ny fiantraikany. Na dia sokajy krizy marobe aza, toy ny fanafihan'ny mpampihorohoro, dia mety hisy ny fiandrasana sy fametrahana protokol napetraka, raha ny tena izy dia misy krizy sy loza raha tsy misy fampitandremana ary mitaky fanehoan-kevitra haingana.
Mandehandeha eny amin'ny sisin'ny aretina
Ny tsy filaminana sy ny fanovana dia ampahany mampiavaka ny indostrian'ny fizahantany. Na dia misy aza ny tsy fitoviana sy ny fifandanjana mandritra ny fotoana iray, dia mandanjalanja foana io fifandanjana io. Misy ny loza ateraky ny fikorontanana. Ny fandefasana ny "effet butterfly", ao amin'ny indostria, ny tranga tsy dia misy dikany dia mety hanomboka andian-javatra mitarika krizy lehibe. Ohatra, ny rahona lavenona avy amin'ny fipoahan'ny Eyjafjallajökull tany Islandy (2010), tsy nisy fiantraikany tamin'ny indostrian'ny fiaramanidina manerantany, niteraka fikorontanana lehibe ho an'ny olona sy ny orinasa manerantany miankina amin'ny fiaramanidina iraisam-pirenena. Raha mandinika ny làlan'ny COVID-19 isika - avy amin'ny tranga iray tany Chine izay hita fa tsy dia zava-dehibe dia nanjary krizy ara-toekarena sy eran-tany.
Ny fotokevitra iorenan'ny korontana dia ny filaharana hipoitra avy amin'ny fanjakana misavoritaka; na izany aza, ilaina ny fisian'ny "nosy fitoniana" mandritra ny korontana. Amin'ny tranga sasany dia masoivohon'ny governemanta toy ny National Guard sy FEMA izy io. Ilaina ny fahatsapana ny dikany, ny paikady na ny rafitra manome lanja izay mitarika ny olona hahatratra tanjona iraisana. Hatramin'ny nanombohan'ny COVID-19 - tsy mbola nisy maso ivoho, fikambanana na olona afaka manome tanana maharitra mitarika hitarihana ny indostria hamaha ny olany sy fanombohana vaovao. Tsy maintsy niatrika ny viriosy sy ny fianjerana ara-toekarena tamin'ny alàlan'ny quarantine sy ny fitokana-monina ity tontolo ity, niankina tamin'ny fampahalalam-baovao sosialy sy ny fahitalavitra ho fampahalalana, izay matetika no rakotry ny lainga, ny fahamarinana tsy mitombina ary ny fihanaky ny tena.
Korontana amin'ny sidina
Ny cliché momba ny olana izay manarona ampahany lehibe eo amin'izao rehetra izao dia manondro fa "miaraka isika rehetra ao." Tsy manakaiky ny fahamarinana akory io (amin'ny fotoana misy ny vidiny lafo). Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia milalao brinkmanship miaraka amin'ireo mpandeha, mpiasan'izy ireo, masoivohom-panjakana ary banky. Mandany vola be ny indostria amin'ny fampiroboroboana ny hevitra hoe azo antoka ny sidina raha ny angona kosa dia mampiseho fa voan'ny COVID-19 ny mpandeha, marary ary miatrika aretina maharitra sy / na fahafatesana. Ny Center for Disease Control (CDC) dia nanambara hoe: "Manatsoaka hevitra izahay fa ny loza mety hitranga amin'ny fandefasana SARS-CoV-2 an-tsambo mandritra ny sidina lavitra dia tena misy ary mety hiteraka cluster COVID-19 manana habe be, na dia amin'ny kilasy fandraharahana aza. -Mametraka toerana misy fandaminana fipetrahana malalaka kokoa mihoatra ny elanelam-potoana ampiasaina hamaritana ny fifandraisana akaiky amin'ny fiaramanidina. ”
Ny Ivotoerana fikarohana sy politika momba ny aretina azo avy amin'ny areti-mifindra (CIDRAP) (21 septambra 2020) dia nanonona fandinihana telo izay mamaritra ny fifindran'ny COVID-19 amin'ny sidina miaraka amin'ny mpandeha iray mpandeha simika izay mety nahatratra 12 hafa farafahakeliny nandritra ny sidina iraisam-pirenena.
Ny fandinihana iray, navoaka tao amin'ny Emerging Infectious Diseases, dia nanadihady sidina Vietnam Airlines 10 ora avy any London ka hatrany Hanoi, Vietnam tamin'ny 1 martsa izay niteraka olona marary 15 ankoatry ny marary mpanondro, namorona taham-panafihana 62 isan-jato tamin'ny 274 - fiaramanidina seza. Amin'ireo mpandeha 12 voan'ny aretina dia 8 (67 isan-jato) no nahazo soritr'aretina taorian'ny mediana 8.8 andro taorian'ny nahatongavany tao Hanoi. CIDRAP dia mihaika ny valin'ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, "Ny fifindrana amin'ny sidina VN54 dia natsangana tao amin'ny kilasy fandraharahana, izay misy toerana malalaka kokoa noho ny an'ny kilasy toekarena, ary niparitaka lavitra kokoa ny aretina noho ny fitsipika 2-laharana na 6.6 metatra natolotra ho an'ny COVID -19 Ny fisorohana ny fiaramanidina sy ny fitateram-bahoaka hafa dia mety ho voasambotra ”( https://www.cidrap.umn.edu/ ). Tamin'ny 20 Oktobra 2020, Rachel DeSantis dia nitatitra ny fahafatesan'ny vehivavy Texas iray 25 taona (2020 taona) COVID-19 tamin'ny 30 jolay, izay maty tao anaty fiaramanidina rehefa nipetraka teo amin'ny tarmac miandry ny fiaingana.
Ny TSA dia nitatitra fa mpiasa 271 no voamarina fa mararin'ny COVID-19. Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana dia mpiasa miisa 2,204 no nosedraina ary mpiasa 8 sy mpikirakira sivana 1 no matin'ny virus (tsa.gov/coronavirus).
Araka ny filazan'ny McKinsey.com, nihena ny fidiram-bolan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ary ny 2/3 amin'ireo fiaramanidina fiaramanidina eran-tany dia napetraka miaraka amin'ireo kaompaniam-pitaterana 18 mitaky bankiropitra tato anatin'ny volana vitsivitsy. Amin'ny sehatra manerantany, tombanana ho very 315 miliara dolara amin'ny fidiram-bolan'ny mpandeha amin'ny taona 2020. Orinasa telo fotsiny, China Airlines, Korean Air ary Asiana Airlines no nitatitra ny tombom-barotra tamin'ny telovolana faharoa noho ny fiankinan'izy ireo tamin'ny entana.
Raha ampitahaina tamin'ny taona teo aloha, ny fidiram-bola Q2 namboarin'i Delta dia nihena 91 isan-jato satria nidina 85 isan-jato ny fahaizan'ny rafitra. United Airlines dia nitatitra fa very $ 40 tapitrisa isan'andro ny orinasa. Lufthansa dia nanoratra fisondrotan-karama 89 isan-taona nandritra ny herintaona raha 82 isan-taona kosa ny fidiram-bola ho an'ny Air France / KLM dia nidina 6.6 isan-jato na 2019 miliara dolara raha oharina amin'ny telovolana faharoa tamin'ny XNUMX.
Nangataka famotsoran-keloka avy amin'ny governemanta ireo zotram-piaramanidina ary manerantany dia nahazo fanampiana mitentina 123 miliara dolara ny indostria. Ny vola dia mandrakotra 1/5 amin'ny vola miditra amin'ny 2019; ny antsasaky ny fanampiana, 67 miliara dolara, dia tonga amin'ny endrika indram-bola na trosa hafa izay haverina, miaraka amin'ny zanabola. Ny sasany amin'ireo vola dia tokony hatolotra ny mpiasa; na izany aza, nampanantena i United fa handoa mpiasa hatramin'ny volana septambra ary avy eo hampihena ny isan'ny mpiasa. JetBlue dia naka ny vola natokana ho an'ny bailout nefa nanapa-kevitra ny tsy handoa ny karamany manontolo amin'ny mpiasa izy ireo, mitahiry vola ho azy ireo ary ny mpiasa JetBlue rehetra dia takiana amin'ny 24 andro tsy voaloa karama eo anelanelan'ny 20 aprily sy 30 septambra 2020; Ny vola natolotry ny Kaongresy ho an'ny mpiasa dia navily lalana hanatsarana ny fitovian'ny fananana tompony (viewfromthewing.com).
Tsy hitan'i McKinsey ny famerenana ny fangatahana fitaterana an'habakabaka manerantany hatramin'ny 2024, na dia mety hotarihin'i Azia - Pasifika aza izany amin'ny 2023 miaraka amin'i Amerika Avaratra sy i Eoropa tonga eo amin'ny ambaratonga mialoha amin'ny taona 2024. , ny mpanjifa dia mety hahazo tombony amin'ny vidiny ambany kokoa; mandritra ny fotoana maharitra, noho ny fihenan'ny fifaninanana, ny filàna famerenam-bola amin'ny findramam-bolam-panjakana sy ny fepetra mety hitranga mifandraika amin'ny fahasalamana, mety hisy ny fiakaran'ny vidin'ny tapakila.
Efitra ao amin'ny trano fandraisam-bahiny
Betsaka ny olona voahidy karatra, mihidy ny sisintany ary mivory ao amin'ny Zoom, tsy dia misy antony na fotoana kely ahafahan'ny mpandeha manao famandrihana hotely. Tsy mieritreritra i McKinsey fa hahatratra ny ambaratonga 2019 ny haavon'ny trano fonenana mandra-pahatongan'ny 2023 ary ny fidiram-bola isaky ny efitrano azo alaina (REV PAR) dia tsy hihemotra raha tsy amin'ny 2024. Ny sehatra mandroso haingana indrindra dia ny toekarena sy ny fialantsasatra ary ny gadra lehibe indrindra. Ny fanadihadian'ny American Hotel and Lodging Association (AHLA) dia nahitana fa trano fandraisam-bahiny sivy amin'ny folo amerikana no nandroaka na nandroba mpiasa ary hotely 8000 mahery no voatery nanidy ny vavahady, mandrakizay. Ny vaovao any ivelan'i Etazonia dia azo antoka fa tsara kokoa. Any London, 80 isan-jaton'ny hotely no nisokatra ary ny trano fandraisam-bahiny any Azia dia manana sary mamiratra miaraka amin'ny 86 isan-jaton'ny trano fandraisam-bahiny any Shanghai ary 92 isan-jaton'ny hotely Hong Kong no nisokatra.
Ny Profesora mpanampy Andria Rusk, manam-pahaizana manokana momba ny areti-mifindra ao amin'ny oniversite Florida International University of Public Health and Social Work dia nahatsikaritra fa, "Toy ny toerana ampahibemaso, misy loza mitatao any amin'ny hotely. Ity risika ity dia avy amin'ny fifandraisana amin'ny fomites - izay antsointsika hoe zavatra na sehatra azo inoana fa mitondra aretina - na amin'ireo olona voan'ny aretina. "
Ny loza mitatao lehibe indrindra ateraky ny fifindrana dia ny fifandraisana akaiky amin'ny olon-tsy fantatra, ary ny olana voalohany amin'ny hotely dia ny mpiasa sy ny vahiny hafa ary ny faritra rehetra misy fihaonan-toerana eo amin'izy telo.
Manaiky ny manam-pahaizana fa tsy ny olona rehetra manana COVID-19 no mampiseho soritr'aretina mba hisy ny fifandraisana eo amin'ny vahiny sy ny mpiasa manaparitaka mangingina ilay viriosy. Noho izany, zava-dehibe ny tsy hifandraisana amin'ireo mpiasa ao amin'ny hotely izay tsy mitafy tarehy sy fitaovana fiarovana manokana (PPE) hafa.
Vao mainka mampidi-doza ny fitsidihan'ny trano fandraisam-bahiny, mampidi-doza kokoa ny fampitaovana iraisana sy ny toerana iraisana noho ny efitranon'ny hotely manokana. Ny lobby dia mety ho feno olona mandritra ny hazakazaka maraina hijerena, eny fa na ny dobo sy spa aza dia mahita olona ao anaty vondrona. Manome risika ny ascenseur satria mizara habaka mihidy amin'ny famatsiana rivotra voafetra ny vahiny. Zava-dehibe ny manamarika fa ny viriosy dia afaka miaina amin'ny sehatra mafy sy tsy misy poria mandritry ny telo andro (ao anatin'izany ny plastika sy vy vy) (New England Journal of Medicine). Na ny fanadiovana lalina aza dia mety tsy hahavita hanafoana ilay viriosy amin'ny faritra rehetra. Azo inoana mihitsy aza fa mijanona eny amin'ny rivotra avy amin'ireo vahiny teo aloha ireo poti-virus ireo ary koa mijanona eo ambonin'ny sehatra nokasihany.
Any amin'ny tanàna maro, hotely sy hotely no ampiasaina ho an'ny olona tsy manam-ponenana, manome azy ireo toerana azo antoka hipetrahana mandritra ny areti-mifindra coronavirus. Tamin'ny fiandohan'ny volana aprily dia nanangana ny Project Roomkey ny governora Gavin Newson (Kalifornia) ary tanjona ny hanomezana efitrano fandraisam-bahiny sy hotely 15,000 ho an'ireo tsy manan-kialofana. Ireo efitrano dia natao ho laharam-pahamehana ho an'ireo izay voan'ny coronavirus, ireo izay mety naseho ary ireo marefo noho ny taonany na ny fahasalamany. Ity programa ity dia voatondro handray vola 75 isan-jato avy amin'ny Federal Emergency Management Agency (FEMA) miaraka amin'ny ambiny amin'ny fandoavam-bola aloa amin'ny masoivohom-panjakana sy ny governemanta eo an-toerana. Riverside County dia vola 2 tapitrisa dolara (hatramin'ny Mey 2020) miaraka amin'ny vola natokana ho an'ny hotely, sakafo ary fandoavam-bola ho an'ireo mpikarama an'ady izay tompon'andraikitra amin'ny fitoriana sy fampifandraisana ny olona amin'ny serivisy sosialy.
Ity programa ity dia fandresena ho an'ireo trano fandraisam-bahiny satria mampiasa ilay programa izy ireo hahazoana vola mikoriana raha toa ka nakatona na voafetra amin'izay azon'izy ireo tompoina. Rehefa nangatahina izy ireo hamantatra ireo hotely mandray anjara amin'ilay fandaharana dia nandà ny hitonona ireo trano ireo ny fanjakana sy ny fanjakana, miaraka am-panohanana hanaja ny tsiambaratelon'ny olona ao amin'ny programa momba ny voucher sy ny fiarovana ny fananana (Melissa Daniels, 18 aprily 2020, desertsun. fr). Ny tsy fisian'ny fanambarana tanteraka momba ny anarana sy ny toerana misy ireo trano dia miteraka fanamby ho an'ireo mpizahatany, tsy fantatra raha ny efitrano fandraisam-bahiny omen'izy ireo dia toerana iraisana amin'ireo marary COVID-19.
Ny areti-mandringana dia nahatonga ny trano fandraisam-bahiny toerana mampidi-doza ho an'ny asa sy ho an'ny vahiny. Wynn Las Vegas dia nahitana tranga nahitana areti-mandringana 500 ary fahafatesan'olona telo hatramin'ny nisokafan'ny toeram-pivarotana tamin'ny volana Jona. Miara-miasa amin'ny Ivon-toeram-pitsaboana ao amin'ny Oniversite, nandamina fitsapana 15,051 ny orinasa miaraka amin'ny tanjona hamantarana ny mpiasa ho voan'ny virus fa asymptomatika; Tranga 548 no nosedraina tsara (taha 3.6 isan-jato). Amin'ny fitambarany, 51 ny tranga tsara voarakitra mialoha ny fisokafana ary 497 ny tranga taorian'ny fisokafana. Hatramin'ny nisokafan'ny trano fandraisam-bahiny, vahiny enina no nanaporofo tsara.
Ny tondro ara-toekarena rehetra dia manamarina ny zava-misy henjana izay nijalian'ny indostrian'ny fizahantany - tsy hoe nisy lesoka nataon'ny sehatra rehetra teo amin'ny sehatry ny indostria, fa kosa tamin'ny tsy firaharahiany ny fepetra takiana fototra tokony hataon'ny olona ao amin'ny governemanta sy ny toerana tsy miankina amin'ny mpitarika (voafidy, voatendry ary voafidy ) manana andraikitra miaro ny olom-pirenena, ny mpandeha, ny vahiny ary ny mpiasa, na inona na inona fandresen-dahatra politika.
Vokatry ny tsy famaliana ny areti-mifindra Any Etazonia, dia ny fiaretan'ny indostrian'ny fizahantany miaritra fatiantoka isam-bolana. Tamin'ny volana oktobra 2020, ny sehatry ny fizahan-tany USA dia nahitana fatiantoka iray volana $ 41 miliara, mitovy amin'ny fatiantoka tamin'ny volana septambra 2020. Ny fandaniana amin'ny dia dia nidina 41 isan-jato ambanin'ny haavon'ny 2019 (fatiantoka 9.1 miliara dolara). Tamin'ny fiandohan'ny volana martsa, ny COVID-19 no nahatonga ny fatiantoka 415 miliara dolara ho an'ny toekarena fitsangatsanganana amerikana. Hawaii, DC New York, Massachusetts ary Illinois dia mitohy miaina fatiantoka mihoatra ny 50 isan-jato. Ny haavon'ny fandaniana amin'ny fivezivezena mitohy dia niteraka fatiantoka $ 53.3 miliara tamin'ny vola azon'ny hetra federaly, fanjakana ary ny hetra nanomboka tamin'ny 1 martsa 2020 (ustravel.org/toolkit/covid-19-travel-industry-research).
Tamin'ny volana aogositra 2020, Alison Durkee (Forbes.com) dia nitatitra fa ny politikam-panjakan'ny Firenena Mikambana izay mamaritra ny fiantraikan'ny areti-mandringana amin'ny indostrian'ny fizahantany dia hanampy fatiantoka hatrany amin'ny 1 tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa tapitrisa asa, manambana asa 100 tapitrisa manerantany. Ny fatiantoka eo amin'ny sehatry ny fizahantany dia vinavinaina hampihena ny harin-karena faobe 1.4 - 2.8 isan-jato. Misy fiatraikany ratsy amin'ny firenena mandroso indrindra, (izany hoe Afrika) sy ny firenena an-dàlam-pandrosoana kely, ny fihenan-tsasatra ary misy ny vehivavy sy tanora manjakazaka amin'ny sehatry ny fizahantany.
Misy drafitra ve
Ny Airlines dia mampiasa fanodikodinam-bola sy fampahalalana vaovao momba ny fifandraisam-bahoaka mba hijanonana ho velona raha ny hotely kosa manandrana mijanona amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo masoivohon'ny governemanta, manome fotodrafitrasa ho an'ireo olona tratry ny virus sy ny quarantine; na izany aza, mandritra ny fotoana maharitra, dia ny teknolojia automatique, ny robot ary ny inteligence artifisialy izay ahafahan'ny trano mampihena ny vidiny raikitra ary miverina miverina.
Miharihary fa ny fihenan'ny fangatahana dia hampihena ny orinasa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Ny valin'ity fanovana ity dia hahitana fiakaran'ny vidim-piainana miandalana miaraka amin'ny vola natokana hanatsarana ny fanadiovana tadiavin'ny fitsipika mifandraika amin'ny fampihenana ny fahaiza-manao (eritrereto ny fanalavirana ny fiaraha-monina).
Vetivety, ny orinasa dia ho malefaka amin'ny famaritana ny vidiny, ny fepetra ary ny fepetra hanamaivanana ny sasany amin'ireo risika ara-bola. Na dia mitaona ny mpanjifa amin'ny sidina sy trano fandraisam-bahiny aza ny paikady momba ny vidiny sasany, dia tsy hitondra fanovana firy ny fiheverana (sy ny filàna) fiarovana sy filaminana izany. Azo inoana fa tsy maintsy manova ny asa aman-draharaha sy ny varotra ny indostria, mifantoka amin'ny fanadiovana sy fanadiovana fanatsarana, ny fampiasana ny PPE hita maso, ary ny fanavaozana ny toerana misy ifantohana amin'ny gorodona hazo fa tsy ny karipetra. Ny fepetra vaovao ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka sy hôtely dia hiompana amin'ny rafitra HVAC nohatsaraina sy ny sivana HEPA, ny volavolan-trano vaovao misy toerana malalaka kokoa, ny varavarankely misokatra ary ny rafitra HVAC misaraka ho an'ny efitrano sy ny toerana ho an'ny daholobe miaraka amin'ny fanoloana olona manana robot.
- Ireo mpandray anjara amin'ny indostria dia hiala amin'ny fifandraisan'ny tena manokana amin'ny teknolojia amin'izay hametra ny fifandraisana sy ny areti-mifindra mety hitranga
- Hisy fetra hametrahana ny isan'ny olona avela hivory amin'ny toerana malalaka
- Teknika sy rafitra vaovao no hamboarina hanomanana sy hanaterana sakafo sy zava-pisotro
- Hiverina ao amin'ny hotely ny fanaraha-maso ny firaketana ny efitrano fa tsy hiantehitra amin'ny antoko fahatelo
- Ny outsourcing ny serivisy dia hanome fahafaha-manao bebe kokoa ary hametra ny loza mety hitranga
- Ny politikan'ny fiantohana fanampiny sy isan-karazany dia hampihena ny fiantraikan'ny loza tampoka / tsy ampoizina.
Jiro sy Tunnels
Ny fahatokiana fa ny fitsangatsanganana dia tsy miteraka aretina na fahafatesany dia handany fotoana ho lasa ampahan'ny olona mpandehandeha. Anjarany na ny sehatra miankina na ny tsy miankina, miara-miasa, ny manarina an'io fahatokisana io. Ireo mpizahatany dia hanome lanja bebe kokoa ny fahadiovana rehefa misafidy ny toerana halehany, dia, fitsangatsanganana, safidy fisakafoanana ary toerana manintona azy ireo.
Tsara daholo ny manana mpiasa manintona mandihy amin'ny alàlan'ny zotram-piaramanidina sy ny efitranon'ny hotely; na izany aza, na dia mety hahafaly ny tompony aza izany dia TSY manome toky ny mpandeha izany. Hila fotoana handresena lahatra ny mpitarika ny indostria fa tsy misy intsony ny 2019 ary efa ho tapitra ny 2020. Ny taona vaovao dia mila fisainana vaovao, ary fitarihana vaovao; olona mbola tsy nipoitra.
“Ny fizahan-toetra ny toetra dia tsy fikirizana rehefa manantena jiro any amin'ny faran'ny tionelina ianao. Ny tena fitsapana dia ny fahombiazana sy fikirizana rehefa tsy mahita hazavana tonga ianao. ” - James Arthur Ray